Negotiator ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
2018မှာထွက်ရှိလာတဲ့တရုတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ The Negotiator ဆိုတဲ့ Romanceကားလေးပါ
တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chinese Paladin3(2009), Palace (2011), Swords of Legends (2014), The Interpreter (2016) and Eternal Love (2017); as well as films Mysterious Island (2011), Tiny Times (2013–2015), The Breakup Guru (2014) and The Witness (2015) အစရှိတဲ့ series,moviesတွေနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ ”Yung Mi”နှင့်
You Are My Sunshine ,Railroad Tigers,The Game Changer,Chinese Odynessyအစရှိတဲ့ကား
တွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး South Korean-Chinese boy group EXO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့”Huang Zitao(Tao)”တို့က mainleads တွေအနေနှင့်ပါဝင်ထားကြပါတယ်
-ဟောင်ဝေ(Yang Mi) က အရမ်း​တော်​တဲ့ ကြားဝင်​ ​စေ့စပ်​​ပေးသူတစ်​ယာက်​(ပွဲစား/အကြံ​ပေး)။
-တရုတ်​ – အ​မေရိကန်​ စီးပွား​ရေးအကြံေ​ပးအဖွဲ့ရဲ့ ကြယ်​တစ်​ပွင့်​။
-သူပါဝင်​​​ဆောင်​ရွက်​​ပေး​တဲ့ အရာတိုင်းက ​အောင်​မြင်​မှု ကိုပဲ ဆွတ်​ခူး​တယ်​
-သူမဟာ ​တော်​တယ်​ ထက်​မြက်​တယ်​ တိကျ​သေချာတယ်​ သူ့ရဲ့ ရာဇ၀င်​မှာ ကျရှူံးတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး
-​ရှောင်​​ဖေး (Huang ZiTao) ဟာ မာနကြီးပြီး ကိုယ်​ထင်​ရာ ကိုယ်​လုပ်​တတ်​တဲ့ သူတစ်​​ယောက်​။
-ချမ်းသာတဲ့ တရုတ်​ – အ​မေရိကန်​ “​ရှောင်​” မိသားစုရဲ့ အ​မွေဆက်ခံသူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်တယ် ဒါ​ပေမဲ့ သူက သူတို့မိသားစုရဲ့ စီးပွား​ရေး လုပ်​ငန်းကို စိတ်​မ၀င်​စားဘူး။
-အဲ့လိုနေတဲ့သူဟာ ကြားဝင်​​စေ့စပ်​​ပေးသူ တစ်​​ယောက်​အဖြစ်​ ​ဟောင်​​ဝေ နဲ့​တွေ့ဆုံခဲ့တယ်​။
-အချိန်​အနည်းငယ်​ အတူလက်​တွဲလုပ်​ပြီး​နောက်​ သူတို့ဟာ ချစ်​သူ​တွေ ဖြစ်​သွားကြတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ​ဟောင်​​ဝေက သူ့မိဘ​တွေ ​သေဆုံးမှူဟာ “​ရှောင်​” မိသားစုနဲ့ ပတ်​သက်​​နေတယ်​လို့ သိလိုက်​ရတဲ့အချိန်​ သူတို့ လမ်းခွဲ ခဲ့ကြတယ်​
-သူနဲ့ ထပ်​မ​တွေ့ရဖို့​မျှော်​လင့်​ခဲ့​ပေမဲ့ ​နှစ်​အနည်းငယ်​ကြာပြီး​နောက်​မှာ သူတို့နှစ်​​ယောက်​ဟာ
ပြိုင်​ဘက်​​တွေ အဖြစ်​နဲ့ ထပ်​​တွေ့ဖို့ ဖြစ်​လာတဲ့အခါ…
-“အနိုင်​”ကိုပဲ သိတဲ့ ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ “အရှူံး”ကို မသိတဲ့ ​ကောင်​​လေး တို့ရဲ့ ပတ်​သတ်​မှုက ချစ်​ခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်​မလား မုန်းခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်​မလား…
-ဘယ်လို Endingလေးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့? ????
Translator : H3K & Linn Linn Zaw & Julia
Encoder : Min Theim Kyaw & Sandar Lwin
File Size : 300 – 400 MB
Sketch ( 2018 )
ဇာတ်ကားလေးနာမည်ကတော့ Sketch တဲ့ … မနေ့ညကမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ အသစ်စက်စက် KDrama လေးပါ … Sketch ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနာမည်အတိုင်းပါပဲ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ … ဇာတ်လိုက်ကောင်မလေးဟာ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် … သူအာရုံရလို့ အကြမ်းခြစ်လိုက်တဲ့ ပုံကြမ်းတွေထဲက!အမှု့တွေဟာ သုံးရက်အတွင်း ဖြစ်လာတတ်တယ် … ဇာတ်လိုက်မလေးအဖြစ်က Missing9ရယ်…
Riverdale Season2( 2017 )